Oditi: mgbe PwC gosipụtara njikwa nke CAF - Jeune Afrique - TELES RELAY
Oditi: mgbe PwC kwuputara njikwa CAF - Jeune Afrique
Azụmahịa ego a na-enyo enyo, ịnyefe na Estonia ma ọ bụ Poland, ịkwụ ụgwọ ego, onyinye FIFA nke siri ike ma ọ bụ enweghị ike ịchọta, nsogbu ọchịchị… Nyocha nke ụlọ ọrụ Britain PwC enweghị obiọma na Confederation of African Football (CAF) .
Firmlọ ọrụ Britain PwC rụrụ na Septemba na Ọktọba 2019, nyocha na Njikọ Njikọ nke Africa (CAF), na-ekpuchi oge 2015-2019.
Ihe si na ya pụta, na nke ahụ Jeune Africa nwee ike ịjụ ndụmọdụ, gosipụtara omume ndị na-enyo enyo, nke ụlọ ọrụ Pan-Africa agọnarịghị, na-azọrọ na ọ dị, n'April 2019, na mmalite nke mmalite nke nyocha izugbe. Nchịkwa ugbu a enyefela nke ochie, nke onye Cameroonian Issa Hayatou gụnyere, na-ewepụta "njikwa ọrụ aka".
PwC enweghị ike ịnweta data nyocha niile. Ndị nke 2015, ọkachasị, nke na-agabigaghị na usoro JD Edwards na-eme ka ihe ndekọ ego. Ndi ozo (Jenụwarị-Juun 2015), ka emelitere. Ndekọ ndekọ ego, nke ruru eru dị ka "onye a na-apụghị ịtụkwasị obi" na "ọ bụghị nkwenye", gwara PwC na a gaghị ewepụ mgbanwe aghụghọ ma ọ bụ ntinye.
Achọpụtara ihe ndị na-ezighi ezi na iji ike eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Enwere okwu nke "emezighi ahazi", "enweghi traceability nke ọtụtụ azụmahịa", ma ọ bụ ọbụlagodi "enweghị akwụkwọ nkwado akwụkwọ. Akụkọ ahụ na-ekwupụta enweghị oke ozi gbasara ego nkwado ma ọ bụ mmefu maka ịhazi ihe. Enwere otutu ego ịkwụ ụgwọ.
Coronavirus: Ikuku France na-eche usoro mgbochi nke mba ...
Nke a bụ ihe ngosi na otu n'ime nnukwu ihe ...
Coronavirus na-agbaji ike nke ụgbọ elu Asia ...
Nke a bụ otu esi edozi migraine na lemon - SANTE PLUS MAG
Ikwu LIVE: Chelsea na Man United na-eduga n'ọsọ maka Dembele
Coronavirus: Air France chere ihu na usoro mgbochi si mba Central Africa - ...
Nke a bụ ihe ngosi na otu n'ime ihe kachasị Apple nwere ike ịbụ ...
Coronavirus na-agbaji ike nke Asia nke ụgbọ elu Africa - Young ...
"Anyị kwesịrị ịmepụta iwu obodo nke Africa" ​​- Alhousseini Diabaté, ọbịa nke…